Filma raràn’i Hong Kong noho ny filaminam-pirenena ary voasazy izay mandefa izany tsy nahazoana alalana · Global Voices teny Malagasy
Mety hampigadra 3 taona ny fandefasana horonantsary tsy nahazoana alalana
Voadika ny 29 Oktobra 2021 15:47 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Français, українська, English
Pikantsarin'ny sombiny amin'ny “Revolution of our Times” ao amin'ny Youtube.
Ny ranty manarana etoana dia nosoratan'i Kelly Ho sy navoakan'i Hong Kong Free Press tamin'ny 27 Oktobra 2021. Navoaka ato amin'ny Global Voices indray izany araka ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Nandany volavolan-dalàna ny mpanao lalàna ao Hong Kong izay ahafahan'ny governemanta misoroka ireo filma heverina ho mifanohitra amin'ny filaminam-pirenena tsy ho azo jerena na avoaka ao an-tanàna. Izay olona rehetra mandranty filma tsy nahazo alalana dia mety hiatrika famonjana telo taona sy handoa onitra 1 tapitrisa HK dollar (manodidina ny 130.000 dollars US).
Nankatoavina tamin'ny 28 oktobra ny tolo-dalàna fanitsiana ny Hitsivolana Fanivanana Filma, izay nahazoana fanohanana mavesatra dia mavesatra avy amin'ireo mpanao lalàna mpanohana ny fahefana tafaorina nandritra ny fivorian-dry zareo farany amin'ny fehim-potoana fahenin'ny Vaomieran'ny Fanaovan-dalàna (LegCo).
Hotakian'ny lalàna vaovao ny mpanao sivana filma ao Hong Kong hanombana raha “mifanohitra” amin'ny tombontsoan'ny filaminam-pirenena ny fampirantiana filma iray mialoha ny hamelana azy ho azo jerena ao an-toerana.
Ao ambanin'ity lalàna vaovao ity ny sekretera lehiben'ny tanàna (John Lee izy amin'izao fotoana izao izay manamboninahitra polisy teo aloha), mpikambana ao amin'ny komitin'ny Filaminam-Pirenena, hahazo fahefana goavana hanaisotra fankatoavana amin'ny fotoana manao ahoana na amin'ny fotoana manao ahoana rehefa heverin-dry zareo fa hanimba ny filaminam-pirenena ny filma iray.
Mety ho afa-miditra amin'ny toerana iray tsy manana taratasy fandidiana avy amin'ny fitsarana ihany koa ny inspektera iray nomen'ny sampan-draharahan'ny fanaovana sivana alalana raha miezaka ry zareo hampiato ny fijerena filma iray na ny famoahana raha toa “ka tsy azo tanterahana ara-pratika” ny fahazoana didy an-taratasy.
Sazy mavesatra kokoa no atsindry amin'ireo mampiseho filma tsy nahazoana fankatoavana avy amin'ny manampahefana, satria azo isaziana telo taona am-ponja sy onitra iray tapitrisa dollar HK izany fandikan-dalàna izany.
Mety hangataka hatramin'ny 28 andro ireo mpanao sivana filma ao an-toerana handinihana ireo filma izay mety hampisy fiantraikany amin'ny filaminam-pirenena. Tsy ho afa-manohitra ny fanapahan-kevitry ny andrim-panjakana mpanao ny sivana ny mpanatontosa filma, satria nosakanan'ny lalàna vaovao ny Vaomieran'ny Famerenam-pandinihana tsy handinika indray ny fanapahan-kevitra nalaina tamin'ny lafiny filaminam-pirenena.
Tonga izao fametrahana vaovao izao volana vitsivitsy taorian'ny namoahan'i Kiwi Chow voalohany ny filma fanadihadiana “Revolution of Our Times” tao amin'ny Fetiben'ny Filma ao Cannes tamin'ny volana jolay. Niresaka ireo hetsika hanoherana ny volavolan-dalàna fandroahana hody any Shina tamin'ny taona 2019 tsy naranty tao Hong Kong ary nofelahan'ny gazety ao an-toerana tohanan'i Beijing ho manandratra ny fahaleovantena, fanitsakitsahana lehibe araka ny lalànan'ny filaminam-pirenena, ilay filma.
Nesorina tamin'ny fandefasana ara-barotra ny lahahatsary fanadihadiana hafa mifandraika amin'ny rotaka tamin'ny taona 2019, anisan'izany ny “Ao anatin'ny Rindrina Biriky Mena- Inside the Red Brick Wall“momba ny fahirano tao Oniversite Polyteknika Hong Kong.
Tamin'ny fandrisihana ireo mpanao lalàna mba handany ny volavolan-dalàna, nilaza tao amin'ny atontan-kevitra a LegCo ny governemanta fa nisy ireo horonantsary mampiseho fanitsakitsahana ny fiarovam-pirenena sy manasongadina “fitondran-tenan-jiolahy tena ahiana.” Milaza izy ireo fa tena “manohana, “manome voninahitra na mandrisika” ny olona hanao ireny fihetsika ireny – indrindra fa ny tanora ny votoaty, ny zava-misy manontolo sy ny fandaharana amin'ireo sarimihetsika ireo .
Amin'izao fotoana izao, azo jerena amin'ny tranonkala fandefasana horonan-tsary sy sehatra toy ny Netflix ny sarimihetsika sasany izay noheverina ho saro-pady ara-politika, toy ny “Ten Years“. Nanoro hevitra ny governemanta ireo mpanao lalàna sasany toa an'i Luk Chung-hung ao amin'ny Federasionan'ny sendikan'ny mpiasa ao Hong Kong mba hanavao ny lalàna ho famenoana ny “banga”.
“Efa lany andro ny lasitr'asa [zoro iasan’] ny didim-panjakana… Manahy aho fa mety ho lasa lavaka lehibe amin'ny ho avy izany,” hoy i Luk.
Ho setrin'izany, nilaza ny Sekretera misahana ny Varotra sy ny Fampandrosoana ara-toekarena, Edward Yau fa ivelan'ny faritry ny volavolan-dalàna ny soso-kevitra hifehezana ny sarimihetsika aseho an-tserasera. Nilaza izy fa mila fotoana bebe kokoa ny governemanta mba handinika “amim-pitandremana sy amin'ny fomba feno” ny fampidirana fanovana fanampiny amin'ny rafitra fanivanana sarimihetsika ao an-toerana.
Rehefa nanontaniana raha mety hisy fiantraikany amin'ny YouTube na ireo sehatra an-jotra hafa ny lalàna ankehitriny, dia nilaza tamin'ny HKFP ny mpitondratenin'ny Birao momba ny Varotra sy ny Fampandrosoana Ara-Toekarena tamin'ny volana Aogositra fa mihatra amin'ny aterineto ny lalàna “hafa”.
“Iharan'ny lalàna sy fitsipika hafa manan-kery ny fandefasana amin'ny [TV] sy ny Aterineto. Miankina amin’ny toe-javatra misy azy sy ny porofo misy ny fahafantarana hoe heloka ilay zava-bita na tsia, ka tsy azo raisina mitokana na atao ankapobeny”, hoy izy ireo.